Umama Isimanga lokuzalwa: kuka ukujabulisa umuntu omthandayo?
Ayikho ukukhanya womuntu abaseduze nawe futhi obakhonzile ezingaphezu kuka umama. Wakhulelwa nge zokuqala ezingu zethu eziyisishiyagalolunye, ephakanyiswe, wanika emseni wakhe futhi ukunakwa, futhi ngenxa yalokho ezihlobene omama cishe bonke abantu ekhethekile. Ungakwazi uthando lwakho ku lwakhe lokuzalwa.
Yiqiniso, wonke umama bayowuthokozela, indlela elula yokubingelela amagama indodana noma indodakazi othandekayo. Kodwa uma nethuba futhi isifiso, kungani ungenzi umama ukumangala ku lwakho lokuzalwa? Njenganoma yimuphi omunye umuntu, isethulo kufaka hlangana ubujamo saziso - ke kufanele kube ukumangala, kungcono into yokuqala. Futhi okwesibili, it is Yiqiniso, kufanele sijabulise futhi ongasoze. Mhlawumbe njengoba ingane ubusuvele wazama ukwenza isimanga lokuzalwa kamama - ngokuvamile izingane ukwenza bebodwa ukuhlanza indlu, ukulungiselela ikhekhe lokuzalwa umama wakhe othandekayo noma enze ezinye izinto zendlu, ngokuvamile iwe phezu kwamahlombe akhe njengoba inkosikazi yendlu.
Kodwa usukhulile, futhi ukwenza lolu hlobo ukumangala, njengoba pomyvka izitsha, ngempela, njengoba wazi, izenzo ezihlazisayo. Yeka isipho ukunikeza umama usuku lokuzalwa Kulezo zimo, ukwenza kube okujabulisayo futhi original? Okokuqala nokusemqoka, yebo, njenganoma iyiphi owesifazane, izimbali ziyojabula wakhe. Akunjalo ngempela isixha omkhulu. Mhlawumbe, uma umama unesithakazelo ukutshala izitshalo ebhodweni, ngoba kuyobe isipho esikhulu isitshalo amahle ezingavamile ebhodweni, futhi incwadi kanye namathiphu emnakekela. Kodwa ozithandayo imbali isixha kanina - kungcono njalo yinto emnandi futhi nice, ikakhulukazi anikeza izifiso esiqotho.
Ukuze wenze isimanga lokuzalwa kamama, ungakwazi 'ukuthatha izintambo ezandleni zabo siqu "futhi uhlele umcimbi ekhethekile wakhe. Ngokwesibonelo, incwadi itafula endaweni yokudlela kulabo abaseduze nawe, bese uthumela isimemo unina iholidi wakhe siqu. Hlela umculo bukhoma, oda ikhekhe lokuzalwa - ukumangala akusho ifa okwakhe, kodwa umama kuzoba yithuba ukubaleka kokuhlupheka iholide nokuzizwa njengaye indlovukazi migubho.
Enye ukumangala kuhle lwami lokuzalwa - usuku okuphumuzayo wachitha ndawonye - wena nonyoko. Mthathe a spa, uhlele uhambo ngosuku nanye indawo hambo, shayela ukugibela amahhashi, zibhukude amahlengethwa dolphinarium, iqhaza ukupheka esikoleni - kuncike izinzuzo zalo uhla izindawo lapho ungasho ngoba ngosuku ukuya nonina, likhulu kakhulu. Futhi isipho esihle kungaba ukuvakashelwa ilunga yemidlalo noma intandokazi ekhonsathini ka obhekele sikamama, kakhulukazi uma ngabe akuvamile bazitike ngokwabo emisebenzini enjalo.
Ngakho, ekuphetheni: lokuzalwa Isimanga kamama akudingi izindleko impahla. Kungenzeka ukuthi njengoba isipho okubhekiwe kakhulu kuye ukwenza impumelelo yakho siqu - emsebenzini, ukuphila siqu, ukwenza izinto zokuchitha isizungu, noma ezemidlalo. Yenza konke okusemandleni ukuthola yalokho, umama ngenqubekela phambili yabo bese benikezela le mpumelelo kuye ngokuqondile - isipho esinjalo ngokuqinisekile kuyoba isimanga wamukelekile kakhulu.
Isipho iminyaka New Year 13: Izindlela amantombazane nabafana
Beautiful ikhekhe intombazane ngonyaka owodwa ubudala ngaphandle kwe-mastic ekwelapheni
Izimpawu ku Maundy ngoLwesine ngaphambi kwe-Easter
Navy Usuku: umlando kanye nezici holidi
Usuku uthuli eRussia. Kuyini ephawulekayo leli holide?
'Novinet': yokusetshenziswa, incazelo umuthi
Anatoly Kot: Filmography kanye Biography of the umlingisi
Indlela ukulungiselela ujamu kusuka viburnum
Iziphi izipho zomshado wesiliva?
Mkhuba Stylish - ibhantshi nge tiger
Salad Frillis: incazelo kanye nezici kulinywe
Sezinwele folliculitis: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Konke mayelana MAZ 5337
Alginate face buso: ukubuyekezwa. Alginate face buso ekhaya
Recipe izaqheqhe inhlama ngokwenza amakhekhe nezinye ehla
Umuthi 'Levamisole ": yokusetshenziswa, kanye nencazelo
Ekupheleni kwesakhiwo - kuyini?